Ny andro fandefasana ho an'ny OnePlus 9 dia ho an'ny 23 martsa | Androidsis
Ny 23 martsa no daty famotsorana an'ny OnePlus 9 sy OnePlus Watch
Mety ho tamin'ny 9 martsa rehefa nanamafy ny fanombohana ny andiany OnePlus 9 ny orinasa sinoa ho an'ny andro 23 martsa; Ary io dia araka ny fantatsika ankehitriny, dia ho avy amin'ny tanan'ny OnePlus Watch, izay efa noresahina hatramin'ny fahavaratra lasa.
Misy smartphone 3 izay manana drafitra OnePlus: OnePlus 9R, OnePlus 9 ary OnePlus 9 Pro. Ny voalohany indrindra dia ho mora vidy indrindra hahazoana ny pro miaraka amin'ireo singa premium rehetra andrasana aminy.
Mukul Agarwal no sivana amin'izany avy amin'ny kaonty Twitter-ny no namoahany tweet faran'izay fohy izay manondro «1 23» fotsiny. Noho izany dia notsoahina fa ny 1 dia ho ny OnePlus "Iray", ary ny 23 andro marina hanombohana ny andiany OnePlus 9 vaovao.
Mandritra izany fotoana izany, ary avy amin'ny kaonty OnePlus India ofisialy ao amin'ny Twitter, sary nozaraina izay hanondro ny 9 martsa ho voamarina hanambara ny fanombohana. Inona ny tetiandro, izao ny hany sisa tavela dia ny iray andro hanondroana ny andro handefasana ny tsaho momba ny fahatongavan'ny finday ...
Ny OnePlus 9 dia hampiavaka azy Efijery 6,55-inch miaraka amin'ny tahan'ny famelomana 120Hz, famahana ny 2400 x 1080p FullHD + sy tontonana iray mankany amin'ny 20: 9. Mazava ho azy, miaraka amin'ny Android 11, ary antenaina ny hametahana lens roa 48Mp ary ny iray ho an'ny selfies 16MP.
Mikasika ny bateria dia hijanona amin'ny 4.500mAh izahay. Ny mahaliana dia ny OnePlus 9 Pro miaraka amin'ilay fakan-tsary Hasselbadl ao aoriana, ary miaraka amin'ny vahaolana QHD + avo kokoa an'ny 3120 x 1440.
Fandefasana andrasana fatratra ho an'ny orinasa sinoa iray izay mitoetra tsara nefa tsy manandrana manohitra ny fitomboana lehibe azo tato anatin'ny taona vitsivitsy i Google na Etazonia. afa-tsy amin'ny maha OnePlus iray itokisan'ny mpampiasa maro azy taorian'ny zava-nitranga tamin'i Huawei.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » OnePlus » Ny 23 martsa no daty famotsorana an'ny OnePlus 9 sy OnePlus Watch
Carbon 1 MK II: Ny telefaona voalohany namboarina tamin'ny fibre carbon dia efa misy daty sy vidiny any Espana
Ahoana ny fomba hamerana ny atiny izay alefa any amin'ny Google Chromecast